दसैँको बेला ३२ जनाको ह’त्या ग’र्नेलाई कसले कारबाही गर्ने ? – Sunaulo Nepal TV
दसैँको बेला ३२ जनाको ह’त्या ग’र्नेलाई कसले कारबाही गर्ने ?
त्यस्तै, २०७४ चैत १ गतदेखि देशभरिबाट बिस वर्षे गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय भयो । त्यो मितिमा बिस वर्षे पुगेको गाडीहरू सरकारले हटायो । तर गाडी त वर्षैपिच्छे बिस वर्ष पुग्छ । २०७३ सालभन्दा पछि कुनै पनि बिस वर्ष पुगेको गाडीहरू विस्थापन गरेको छैन । २०७४ सालभन्दा पछाडि पनि २० वर्ष पुगेका गाडीहरू हटाएको छैन। सरकारले २०७० सालमा भाँडाको वा निजी प्लेटको गाडीहरू दर्ता भएकै मितिमा बिल बुक र ढड्डामा चल्ने अवधि लेख्ने नीति बनाएको थियो ।
यो नीति २०७१ वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीको दबाबमा आएर सरकारले यो निर्णय दराजमा थन्काइदियो । यातायात व्यवसायीले यो निर्णय कार्यान्वयनमा जान दिएन। सरकार भन्दा यातायात व्यवसायी शक्तिशाली छन् । जबसम्म व्यवसायी र राजनीतिक दलका नेता बिच यस्तो अपवित्र गठबन्धन रहिरहन्छ त्यो बेलासम्म अनाहकमा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइरहनु पर्छ।
Previous नवरात्रको नवौँ दिन सिद्धिदात्री देवीको पूजा आराधना
Next ठूलो भवनको नवौं तलाबाट खस्दा बीएमडब्लू कुच्चियो, ज्यान जोगियो!